News | जिनेदिन जिदान
News | Tag: जिनेदिन जिदान
जिदानको रणनीतिले काम गरेन !
एजेन्सी । रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानलाई यसपटकको च्याम्पियन्स लिगमा सफलता मिल्न सकेन । रियललाई लगातार तीन पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका उनले यसपटक भने नमिठो झट्का पाए ।
जिदान भन्छन्ः बेलले खेल्न चाहेनन् त्यही भएर टिममा परेनन्
एजेन्सी । पछिल्लो समय रियल मड्रिडमा प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान र खेलाडी ग्यारेथ बेलबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार ग्यारेथ बेलले च्याम्पियन्स लिगमा म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको खेल खेल्न चाहेनन् ।
भिडियो च्याट लिक भएपछि रियलका प्रशिक्षक जिदाने खेलाडीसँग रिसाए
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान आफ्ना खेलाडीहरुसँग रिसाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पालना गर्दै सबैजना घरमै छन् ।
‘एल क्लासिको’ अघि रियलका प्रशिक्षक जिदानले के भने ?
एजेन्सी । स्पेनिस क्लबद्वय रियल मड्रिड र बार्सिलोनाबीचको खेल (एल क्लासिको) आज राति हुँदैछ । सिजनको दोस्रो क्लासिको रियल मड्रिडको घरेलु मैदान सान्टियागो बेर्नाबेउमा हुन लागेको हो ।
जिदानको गाडीले अर्को गाडीलाई ठक्कर दिएपछि...
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको गाडीले अर्को गाडीलाई ठक्कर दिएको छ । गत शनिबार जिदान अभ्यास सत्रमा सहभागी हुनको लागि भाल्डेबेबासबाट जाँदै गर्दा उनको गाडीले अघि रहेको गाडीलाई ठक्कर दिएको थियो ।
फाइनलका राजा जिदाने
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान फाइनल खेलको लागि राजा नै भएका छन् । रियल मड्रिडको प्रशिक्षक भएर उनले १० उपाधि जितेका छन् । जसमध्ये ९ उपाधि फाइनल खेलेर जितेका छन् भने सन् २०१६–१७ को सिजनको ला लिगा उपाधि पनि उनले जिताए ।
भालभर्देको अवस्थाबारे जिदानले यसो भने
एजेन्सी । स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा पुगेको रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले प्रतिद्वन्द्वी क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेष्टो भालभर्देको बारेमा बोलेका छन् । बार्सिलोनामा प्रशिक्षक भालभर्देमाथि आलोचना भइरहेको बेला जिदानले यस्तो अवस्था सबै प्रशिक्षकलाई आउने बताएका हुन् ।
पेप ग्वार्डिवला विश्वकै उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुन्ः जिदान
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले पेप ग्वार्डिवला विश्वकै उत्कृष्ट प्रशिक्षक भएको बताएका छन् । शनिबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।